Date: 2nd-august-2018 Time: 3:45:38 pm
Zimbabwe's capital city of Harare resembled a ghost town Thursday less than 24 hours after three people were killed in clashes between opposition protesters and security forces over the results of Monday's presidential election.
Two Zimbabwean soldiers wearing balaclavas shout orders to street vendors and money changers in the Copacabana market in Harare.
With police surrounding the MDC building, opposition party spokesman Nkululeko Sibanda insisted his organization was well set for victory.
"We have collated results from the 80% of the polling stations that we're allowed to do so and we're very clear that we're going to win," he told CNN
"There is no way with the 20% they are going to win. If the result is such that if we didn't win then certainly it's not the reflection of what the people of Zimbabwe did on the 30th."
Supporters of Zimbabwean opposition MDC Alliance Party rip up an electoral poster in support of the ruling Zanu-PF party in the capital.